Chinja kunzwisisika kweiyo 3D Kubata pane yako iPhone 6s | IPhone nhau
Chinja kunzwisisika kweiyo 3D Kubata pane yako iPhone 6s
Musi waGunyana 9, Apple yakaunza chizvarwa chechipiri cheMasimba Kubata icho chavakaisa muiyo iPhone 6s uye iPhone 6s Plus. Chizvarwa chekutanga chakakwanisa kusiyanisa pakati pemhando mbiri dzekumanikidza: kubata uye kupomba. Chizvarwa chechipiri chinokwanisa kucherechedza matatu marudzi ekumanikidza: kubata, kupomba uye kupomba kwakasimba. Iyo nyowani system yakanzi 3D Kubata uye pakutanga zvingangoita kuti tinozviona zvichinetsa kudzora. Ndosaka chingave zano chakanaka. gadzirisa kunzwisisika kweiyo 3D Kubata pane yedu iPhone 6s kana iPhone 6s Plus kuitira kuti kubata kwedu kuve kwakanyatsojeka.
Maitiro ekugadzirisa 3D Kubata kunzwisisika pane iPhone 6s
Tinoenda kuGeneral / Accessibility / 3D Touch.
Isu tinofambisa iyo mubato kusvika pakuti isu tinodzora zvirinani. Isu tine sarudzo yekuisa pane yakapfava, yepakati kana yakasimba. Kana isu tichifunga kuti tinokwanisa kudzora zvinobata tisinga tsimbirire zvakanyanya, isu tinosarudza zvakapfava. Zvikasadaro yepakati kana yakasimba.
Pazasi isu tine anowanikwa kwekunzwa bvunzo kwatinogona kuyedza kumisikidza nyowani. Vazhinji vashandisi vakaedza iyo 3D Kubata vanoti zvinoita sekunge mabhatani egonzo ari pamunwe uye bvunzo iyi yakati rebei nezveyedzo iyo inowanikwawo mumushonga (kana touchpad) kumisikidzwa pane chero komputa, kunyanya kumhanya wekubaya kaviri. Ini handina iPhone 6s (uye ini handizive kana ndichida), asi ini ndinofunga zvakanakisa kumisikidza kunzwisisika zvakapfava. Kana tangojaira, isu tinokwanisa kudzora iyo system yese tisingashandise yakasimba Kunyangwe ndisati ndayedza izvozvi uye ndinogona kukanganisa.
Unotova ne iPhone 6s kana iPhone 6s Plus? Ndedzipi hunyoro hwaunosarudza pane zvitatu zviripo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Chinja kunzwisisika kweiyo 3D Kubata pane yako iPhone 6s
Ini ndinofunga chinhu chake chinenge chiri chekuisimbisa kuti uzive kuti uri kuzviita.Kana iwe ukaiisa pane yakapfava uye usingadzori zvakanyanya, ichaita zvinhu zvisingadiwe.
Mhosva dzakanakisa dzeiyo iPhone 6 uye iPhone 6s
Facebook Messenger inovandudzwa ichiwedzera mhinduro nekukurumidza